N'ogbe Curcumin 95% na-emepụta na suppliers | Tong Rui Bio-Tech
Mkpụrụ Akwukwo nri ntụ ntụ
Ngwakọta ntụ ntụ Organic
Spermidine Nnu ntụ ntụ
Na -arụ ọrụ 99%
Black agwa ahu ihe wepụ 25% anthocyanidins
Sesquioxide nke Germanium
Alfa GPC ntụ ntụ 99%
Ihe karịrị 98%
Curcumin amịpụtara si turmeric, nke bụ otu nke ginger ezinụlọ. Turmeric powder bụ mkpa agba? Gị n'ụlọnga ke Curry nke Indian ndị mmadụ na-amasị nnọọ ukwuu; Chinese ndị mmadụ na-eji ya dị iche iche iche iche nke pastries, dị ka steamed kpara akpa mpịakọta. Ọzọkwa, turmeric na-eji na Indian Ayurvedic ọgwụgwọ na Chinese omenala medicine.Curcumin nwere ike ịdị na ihe abụọ tautomeric iche-iche, keto na enol. The enol ụdị bụ ihe energetically ufọk ufene ke siri ike phaseand na ngwọta.
Curcumin powder bụ isi curcuminoid nke turmeric. Curcumin wepụ bụ a eke nri agba? Gị n'ụlọnga; nwekwara ọ n'ọtụtụ ebe dị ka sizinin na dietary emeju.
Ọnụahịa FOB: US $0.5 - 2000 / KG
Min.Order ibu: 1 KG
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 KG / kwa ọnwa
Turmeric bụ a herbaceous osisi, site na nkà mmụta ọgwụ ọgbara na omenala na nkà mmụta ọgwụ ma support; na nrụpụta ọrụ na a zuru ezu, ata dịghị mmetụta, na oriri. Chinese ndị mmadụ mgbe niile na-eji ya ịnọgide na-enwe ahụ ike na-agwọ ọrịa. Isi nọ n'ọrụ mgwa turmeric akpọ curcumin, dịwo ji dị ka mgbochi mkpali ọgwụ ọjọọ ka na-eji. Modern nnyocha sayensị-akwado na turmeric bụ ihe kasị mma na nkà mmụta ọgwụ-maka ọrịa nke mmepeanya ọgbara ọhụrụ nwere a dịgasị iche iche nke pụrụ iche ọgwụ mmetụta. Mmalite Southern Asia, India ma ọ bụ Indonesia, wdg
Turmeric ntụ ntụ bụ a na-egbuke egbuke odo powder mere akọrọ egweri nke tozuru okè turmeric rhizomes (ala ị ga). The ojiji nke turmeric maka agba? Na ekpomeekpo nri, n'ihi ịchọ mma nzube na maka ọgwụ Njirimara ụbọchị laghachi oge ochie Vedic omenala India. Ji fọrọ nke nta niile Indian curries, a ose nwere fọrọ nke nta dịghị calories (1 tablespoon = 24 calories) na efu cholesterol. Ọ bụ ọgaranya dietary eriri, ígwè, potassium, magnesium na vitamin B6.Nowadays curcumin salts nwekwara dị, nke bụ mmiri soluble ma si otú dịkwuo nso nke na ngwaahịa na nke curcumin nwere ike ji mee.
Product aha: 95,0% Curcumin
Botanical Source: Turmeric Root Extract
Part: Root (Mịrị, 100% Natural)
Mmịpụta Method: Water / ọka Alcohol
Ụdị: aja aja mma powder
nkọwapụta: 95% -99%
molekụla iwu: C9H11NO4
molekụla ibu: 197,19
Solubility: Good solubility na hydro-aba ngwọta
Mbukota: na 25kgs eriri rụọ
Nchekwa: Nọgidenụ na akpa unopened na jụụ, akọrọ ebe, na-pụọ ike ìhè
Adịghị adị Life: 24 ọnwa si ụbọchị nke mmepụta
1. Curcumin mainly used in many foods as a coloring in mustard, cheese, beverages and cakes;
2.Curcumin eji maka dyspepsia, adịghị ala ala ihu uveitis na Helicobacter pylori bacteria;
3.Curcumin eji dị ka a Nde analgeic, na maka colic, ịba ọcha n'anya, ringworm na obi mgbu.
4.With ọrụ nke rụọ ọbara na n'imeso amenorrhear;
5.With ọrụ nke lipid-ẹsụhọde, mgbochi mkpali, choleretic, mgbochi akpụ na mgbochi ọxịdashọn;
6.Cureumin contatns antioxidants, nke chebe mkpụrụ ndụ megide mmebi mere biotek free radicals;
7.Curcumin nwere mmetụta na ẹsụhọde ọbara mgbali, na-emeso-arịa ọrịa shuga ma na-echebe imeju;
8.With ọrụ nke n'imeso ndị inyom dysmenorrhea na amenorrhea.
1. Tumadi eji dị flavor mmako ka pigments na oriri,
2. Ọ na-nwere a mma arụmọrụ dị ka anticancer, mgbochi, mgbu antioxidation, antimutagenics, Lipoidemia ibelata na wdg
3. Ugbu a ọ na-eji dị ka a nri agba? Ebe ọ na-ejikarị na-enye nri (ubé odo agba) a na-eji na-echebe nri na ngwaahịa si ìhè anyanwụ.
4. The curcumin / polysorbate ngwọta ma ọ bụ curcumin powder etisasịwo ke mmanya na-eji maka mmiri-nwere ngwaahịa. N'elu-agba?, Dị ka pickles, relishes, na mọstad, na mgbe ụfọdụ a na-eji chefuo ebelatawala.
More ọmụma nke TRB
USFDA, CEP, kọsha HALAL GMP ISO Asambodo
pụrụ ịdabere Quality
Fọrọ nke nta ka afọ 20, bupu mba 40 na mpaghara, ihe karịrị 2000 batches emepụta site TRB enweghị ọ bụla mma nsogbu, pụrụ iche ọcha usoro, adịghị ọcha na-adị ọcha akara zukoro USP, EP na CP
▲ Quality nkwa System
▲ Document akara
▲ nkwado System
▲ esịtidem oditi Protocol
▲ Suppler oditi System
▲ Ihe Control System
▲ nkwenye nkwado System
Control Dum Sources na Filiks
Nditịm achịkwa niile akụrụngwa, ngwa mma na nkwakọ materials.Preferred ngwaọrụ na ngwa mma na nkwakọ ihe soplaya na US DMF nọmba.
Ọtụtụ akụrụngwa suppliers ka ọkọnọ obi ike.Strong Cooperative Oru na-akwadoInstitute of Botany / Institution of microbiology / Academy of Science and Technology / University
Curcumin ntụ ntụ
Turmeric Root Extract Vs Curcumin
Turmeric Root Extract Vs Powder
Hops Flower wepụ
Cinnamon Bark wepụ
Ilu egusi wepụ
Griffonia simplicifolia nkpuru wepụ / 5-HTP
Idenye aha na anyị Akwụkwọ Akụkọ:
gaa na anyị
Pioneer Bio-Park, Ọ dịghị 127 North Road Xishan Bridge, YU Hua Tai District, Nanjing, China 210012